I-Fieldboom: Iifom ze-Smart, uPhando, kunye neKhwizi | Martech Zone
I-Fieldboom: Iifom ze-Smart, uPhando, kunye neeKhwizi
NgoLwesithathu, nge-31 kaJanuwari 2018 Douglas Karr
Intengiso yezicelo zefom ixakekile. Kukho iinkampani ezijikeleze ukusingathwa kophuhliso lwefom ngaphezulu kweminyaka elishumi kwiwebhu, kodwa itekhnoloji entsha ihlala inamava omsebenzisi aphezulu kakhulu, ukunikezela ngengqondo okunzima, kunye neetoni zokudityaniswa. Kuhle ukubona le ntsimi ihamba phambili kakhulu.
Ukunika ingxelo ngeFIeldboom
Inye inkokeli phaya I-Fieldboom, eneempawu ezibandakanya:
Ukuphendula uPiping -Bandakanya impendulo yombuzo odlulileyo njengenxalenye yombuzo omtsha okanye kwi Enkosi isikrini.
Ukuphendula amanqaku - Amanqaku abantu asekwe kwiimpendulo kwaye ubonise isiko Enkosi iphepha okanye uqondise kwakhona i-URL ngokusekwe kumanqaku abo.
Ukufikelela kwe-API -Ukufikelela kwi-API yonjiniyela opheleleyo wokutyhala kunye nokutsala iimpendulo, ukwenza iingxelo zesiko kunye nokunye.
isiqinisekiso -Thumela ngokuzenzekelayo isiqinisekiso, enkosi okanye amanyathelo alandelayo nge-imeyile kuye wonke umntu ogcwalisa ifom okanye uphando.
umhleli -Yakha iifom kunye nophando usebenzisa isikhombisi-kwaye ucofe umhleli kwimizuzu nje embalwa. Akukho uyilo okanye izakhono zobugcisa ezifunekayo.
Ukulayishwa kweFayile - -Yenza kube lula ukuba abantu bafake iifayile ngokusebenzisa iifom zakho, kubandakanya iiPDF kunye neentlobo ezinkulu zeefayile.
Unxibelelaniso -Zenzekelayo iimpendulo kwi-CRM yakho, isoftware ye-imeyile okanye i-750 + ezinye iinkqubo ngonqakrazo olumbalwa.
iilebhile -Yila kwaye usebenzise iileyibhile kwiimpendulo. Umzekelo, unokuhlela ukukhokelela kuKutshisa, ukufudumala kunye neCold ukuze ulandele ngokulula.
Izaziso -Yaziswa ngeempendulo ezintsha ngeendlela ezininzi kubandakanya i-imeyile, iiSlack kunye nezaziso zedesktop.
iinketho -Thatha imihla namaxesha okuqeshwa, amanqaku eNkuthazo yeNet, kunye nezinye iindlela ezilungiselelwe.
iintlawulo -Yila imigaqo yamaxabiso esiko ngokusekwe kumanqaku okuphendula kwaye uthathe iintlawulo usebenzisa iStripe okanye iPaypal.
zobuqu -Yandisa ukugqitywa kwamaxabiso ngomyalezo owamkelekileyo ngokwesiko kwaye ubulele abantu ngomyalezo wesiko xa begqibile.
Phinda uqondise -Thumela abantu kwiwebhusayithi yakho, kwibhlog yakho okanye kwivenkile ekwi-Intanethi bakugqiba ukuyenza ifom okanye uphando.
Ukubika -Bona iintsingiselo kunye nokuqonda kuzo zonke iimpendulo usebenzisa iideshibhodi ezinamandla zokunika ingxelo kunye neetshathi.
noluphendulayo -Lonke uphando kunye nemibuzo kujongeka kwaye uzive umhle kwifowuni okanye kwi-tablet.
Tsiba uLogic Sebenzisa ukutsiba logic ukutshintsha izinto abantu abazibonayo ngokulandelayo, ngokusekwe kwimpendulo yabo kumbuzo wangoku.
I-Fieldboom ilula ngokwaneleyo ukuba isebenzise nabani na, kodwa inamandla ngokwaneleyo okwenza i-smart automation eya kuthi ikuncede ukukhulisa ishishini lakho ngokukhawuleza.
Inketho yeselfowuni yoKhetho
Inombolo yeFowuni yeBomboom
Ukulayishwa kweFowuni yeFomboom
I-Fieldboom eshukumayo yoobhontsi
Fieldboom Mobile Bhalisa
Zama i-Fieldboom yasimahla!
tags: phendula imibhobhophendula amanqakuintsimiifom apiukudityaniswa kwefomiintlawulo zeefomfomatha kwakhonaingxelo yokunika ingxeloiifomuinqaku lokukhuthaza umnathaNtlawuloPayPalImibuzoileyibheli yokuphendulaiifom eziphendulayotsiba ingqiqoIifom zeSmartngombalaZophando
Ukuthetha: Ukwakha, ukuKhangela, ukuVavanya, kunye nokuHlaziya iiNkqubo zokuThumela ii-Ecommerce
Inguquko yoKwenziwa kweeNjini zoKhangelo: Ngengcebiso ethile yasimahla ye-SEO